Zeziphi izilumkiso zokusetyenziswa kwee-drill bits
I-Drill bit luhlobo lwezixhobo eziqhelekileyo ezisetyenziswa kwi-hardware. Nangona ubukhulu be-drill bit encinci, ayinakohlulwa kushishino lolwakhiwo lwanamhlanje. I-drill bit nayo kufuneka inike ingqwalasela kwimiba ethile ngexesha lenkqubo yokusetyenziswa, ukuze kuqinisekiswe ukuba ...
Ukugcinwa komngxuma wokuvula umngxuma.
Ngethuba lokusetyenziswa kwemihla ngemihla ye-hole opener, umsebenzi wokulondoloza ohambelanayo uyafuneka ukuze kuqinisekiswe ukuba umngxuma wokuvula unokusetyenziswa ngokuqhelekileyo ixesha elide. Kufuneka sicoce isivula-mingxuma esisetyenzisiweyo. Okokuqala, kufuneka siqhawule umngxuma wokuvula umngxuma, sicoce ngaphakathi, sisuse inkunkuma eshiywe kwindawo yokuvula umngxuma, kwaye...
Amanyathelo okhuseleko okusetyenziswa kwesivula-mngxuma?
Izivulo zemingxuma zineendlela ezininzi zokusetyenziswa kulwakhiwo lwemibhobho, eyona nto ibaluleke kakhulu yeyomsebenzi wokwakhiwa kwemibhobho. Itekhnoloji yolwakhiwo lokuplaga lombhobho wokuvula umngxuma lufanelekile ukuplaga komngxuma wokuvula umngxuma wepetroleum, imibhobho yepetrochemical, ur...